Puntland Voice – Page 974 – Codka Dalka iyo Dadka
Maamulka idaacada Quraanka oo ay la wareegeen xarakada Alshabaab
Muqdisho (AB):-Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab ayaa si rasmi ah ula wareegay maamulka Idaacada quraanka kariimka ah ee Magaalada Muqdisho taasoo hore ganacsato u hoos tagi jirtay. Inkastoo ay Wasiirka warfaafinta Dowlada KMG Soomaaliya uu sheegay in xoog shabaabku kula wareegeen idaacadaasi ayaa haddana wararka […]
Dowlada iyo AMISOM oo ka jawaabeen warkii shalay ka soo baxaya Xarakada Alshabaab.
Muqdisho (Ab):-Kadib markii shalay galab uu afhayeenka Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab ku dhawaaqay dagaalo hor leh oo ka dhan Dowlada KMG iyo AMISOM ayaa waxaa arintaasi jawaabo ka baxshay saraakiil u hadashay Dowlada iyo AMISOM. Wasiirka warfaafinta Dowlada KMG Soomaaliya ING. […]
Dagaalada iyo Duqeymaha Madaafiic oo Saaka Muqdisho ka sii socda
Muqdisho (AB):-Dagaaladii iyo duqeymihii shalay galab ilaa Xalay oo dhan ka socday Muqdisho oo saaka halkiisii ka sii socda. Qaar ka mid ah aagaga ay isku horfadhiyaan Ciidamada Dowlada KMG Soomaaliya iyo Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab garaahaan wadada isku xirta Isgoysyada debka […]
Afhayeenka Xarakada Alshabaab oo Galabta Iclaamiyay Dagaalo hor leh oo ka dhan ah Ciidamada Dowlada iyo kuwa AMISOM
Muqdisho (AB):-Sheekh Cali Maxamuud Raage (Sh.Cali dheere) afhayeenka Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab oo galabta shir jaraa’id u qabtay saxaafada ayaa ku dhawaaqay dagaalo ka dhan ah Dowlada KMG Soomaaliya iyo Ciidamada AMISOM. Waxyar kadib markii uu Afhayeenku shirkiisa dhameeyay waxaa Magaalada […]
« Previous 1 … 972 973 974 975 976 … 1,044 Next »
4 months agohalkaaso labada dal ay wadahadallo uga furmayaan. Wafdiggaan ayaa waxaa hoggaaminaya wasiirka